FAAH-FAAHIN: Weerar Qaraxyo Waaweyn Lagu Daah-furay Oo Maanta Ka Dhacay Muqdisho - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » FAAH-FAAHIN: Weerar Qaraxyo Waaweyn Lagu Daah-furay Oo Maanta Ka Dhacay Muqdisho
FAAH-FAAHIN: Weerar Qaraxyo Waaweyn Lagu Daah-furay Oo Maanta Ka Dhacay Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararka ka imanaya waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen xarunta wasaaradaha Amniga iyo arimaha Gudaha oo ku taalla nawaaxiga xarunta Baarlamaanka ee Isgoyska Sayidka.
Weerarka waxaa lagu daah-furay qaraxyo waaweyn oo si aad ah looga maqlay degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana markaas kadib gudaha xarunta labada wasaaradood oo hal meel kuwada yaal u daatay ciidamada Al-Shabaab.
Rasaas culus ayaa bilaabatay markii ay xoogagga Al-Shabaab gudaha u galeen, waxaana goobta gaadhay ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa Amisom oo isku dayaya iney gudaha u galaan xaruntan la weeraray.
Qiiq madow iyo Uuro ayaa laga arkayaa hawada magaalada Muqdisho, Waxaanay dad goob joogayaal ah u sheegeen warfidiyeennada in ay maqlayaan jugta qaraxyo is xigxiga iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayo.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al-Shabaab laguna faafiyey barahooda Internet-ka ayay ku sheegatay mas’uuliyadda howlgal isugu jira mid naf-hurnimo iyo mid toos ah lala beegsaday badhtamaha magaalada Muqdisho.
“Mujaahidiinta ayaa howlgal guuleystay ku qaaday xarumaha murtadiinta ee Muqdisho, camaliyad istish-haadi ah ayaa howlgalka lagu daah-furay kadibna rag inghimaasiyiin ah ayaa gudaha ugu daatay cadowga” ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyey waxay tibaaxayaan in xoogaggii goobtaasi weeray ay la wareegeen gacan-ku-heynta xaruntii Wazaaradaha, waxaanay halkaasi ka bilaabeen inay mid mid u toogtaan xubno kala duwan oo ka tirsan Labada Wazaaradood, sidoo kale qaraxyada ka dhacay albaabka xarunta ayaa la sheegayaa in lagu dilay tiro fara badan oo ah askarta dowladda.
Xubnaha dowlada Farmaajo lagaga dilay weerarkan ayaa waxaa ka mid ah Agaasimihii Wasaaradda Arimaha Gudaha Muxamed Axmed Ilkacase iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda. Sidoo kale saraakiil, askar iyo xubno kale oo ka tirsan dowlada ayaa lagu warramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkan.
Qaar ka mid ah xubnaha Wazaaradaha Xaruntooda la weeraray ee dhimashada iyo dhaawac noqday ayaa iska soo tuuray dabaqa dhismaha Wazaaradaha sababo ku aadan cabsi ay ka qabeen iney u gacan-galaan ciidamada Al-Shabaab ee soo weeraray xarunta Wasaaradda.
Weerarkan ayaa waxba kama jiraan ka dhigaya dadaalladii ay hoggaanka dowladda Federaalku ku doonayeen in ay ku sugaan ammaanka xarumaha waaweyn ee ay ku leeyihiin hareeraha wadada Makka Almukarrama.